तपाइँका भिडियोहरूमा प्राय: टिप्पणी गर्न YouTube सदस्यताहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने? - सबपल्स
आज, हामी निरन्तर डिजिटल मार्केटिंगको लागि बढ्दो मागको साक्षीरहेका छौं। परम्परागत विपणन विधिहरू पहिले नै अप्रचलित भइरहेका छन्। टेलिभिजन-आधारित विज्ञापन अब लक्षित यूट्यूब र फेसबुक विज्ञापनहरूको लागि मार्ग बनाउँदैछ। सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मको अभूतपूर्व लोकप्रियता यस पारीको प्रमुख कारण हो।
डाटा एनालिटिक्सको आगमनसँगै, सोशल मिडिया मार्फत सामग्री मार्केटिंगले कम्पनीहरूका लागि उच्च रूपान्तरण दर प्रदान गर्दैछ। परम्परागत मिडियाको विपरीत, व्यक्तिगत प्रभावकारहरूले यस बजार क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यसले अनुकूलित सामग्री र स्थिर दर्शक सment्लग्नता समावेश गर्दछ। सबै प्रमुख मिडिया प्लेटफर्महरूमा, 'ग्राहकहरू' 'मनपर्दो', 'सेयर', र 'टिप्पणीहरू' को स'्ख्या यस सगाईको प्रमुख सूचक हो। यो आश्चर्यको कुरा होइन कि YouTube संलग्नताको मामलामा टिप्पणी मार्केटिंग एक लोकप्रिय अवधारणा बनिरहेको छ। यस ब्लगमा, हामी YouTube सment्लग्नताको विचार खोजी गर्नेछौं, विशेष गरी युट्युब टिप्पणीहरूको माध्यमबाट।
सामग्री मार्केटिंग र सोशल मीडिया
सामग्री मार्केटिंगमा दर्शकहरूको ध्यान आकर्षित गर्नका लागि लक्षित मार्केटिंग सामग्रीको सिर्जना समावेश छ। डिजिटल मार्केटिंगको यो फारमले पाठ, भिडियो, अडियो र छविहरू समावेश गर्दै सामग्रीको बहु स्वरूपहरू समाहित गर्दछ। यहाँ मुख्य ध्यान दर्शकहरूलाई अनुकूलित सामग्री वितरण गर्नेमा हो। डाटा एनालिटिक्स, स्थान ट्यागहरू, आदि। सामग्री मार्केटरहरूलाई क्षमताको साथ दर्शक प्राथमिकताहरू ठीक ठीक गेज गर्न सक्षम गर्दछ।
कुनै पनि सामग्री मार्केटिंगको सफलता स्वाभाविक रूपमा धेरै सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा यसको पहुँचसँग जोडिएको छ। वास्तवमा, एक राम्रो विचार गरीएको डिजिटल मार्केटिंग रणनीति केवल लागत प्रभावी तर प्रभावकारी पनि छैन। यो एक मार्केटर को लागी आफ्नो सामग्री दुनिया मा कहीं पनी प्रसारण गर्न को लागी अनन्त संभावनाहरु प्रदान गर्दछ। तर यसले अत्यधिक आकर्षक सामग्री डिजाइन गर्ने आवश्यकतालाई पनि औंल्याउँछ जुन दर्शकहरूलाई उनीहरूको सर्कलमा साझेदारी गर्न प्रोम्प्ट गर्दछ। सफल सामग्री मार्केटिंगका लागि, यो गुणक प्रभाव तपाइँको सदस्यता / अनुयायीहरूको 'मनपर्दो' र 'साझा' द्वारा बनाईएको। यसको पछाडि, दर्शक अन्तर्क्रियाको अन्य मोडहरू जस्तै टिप्पणी संलग्नता महत्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ। हामी कसरी जाँच गर्छौं जाँचौं।
के भिडियो सामग्री लोकप्रिय बनाउँछ?
के सबै प्रकारका सामग्रीले दर्शकहरूमा समान प्रभाव पार्दछ? सामग्री विज्ञका अनुसार व्यक्ति फरक-फरक सामग्री प्रकारलाई फरक फरक पार्दछन्। सबै सामग्री प्रकारहरूमा, भिडियो सामग्री सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम मानिन्छ। योसँग सामग्रीको अन्य कुनै पनि प्रकारको भन्दा बढी दर्शकहरूको ध्यान आकर्षण गर्ने शक्ति छ। भिडियो सामग्री को लोकप्रियताको प्रमुख कारणहरू हो,
विवरणको लागि स्कोप
भिडियो सामग्रीको कुनै पनि उत्पादन वा सेवा को बारे मा अधिकतम विवरण सहित उच्च स्कोप छ। यसले दर्शकलाई सूचित खरीद विकल्पहरू बनाउन मद्दत गर्दछ। छविहरू र परम्परागत उत्पाद स्पष्टीकरणहरू पछाडि, यसले दर्शकमा विश्वास बढाउँदछ। विवरण बाहेक, यसले एनिमेसन, विशेष प्रभावहरू, इत्यादि प्रयोग गरेर आँखा लिने भिजुअलहरू समाहित गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
सामग्री मार्केटिंगका लागि, दर्शक सment्लग्नताको मैट्रिकहरू उनीहरूको अभियान प्रभावकारिताको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। दर्शकहरूले लामो ब्लगहरू, लेखहरू, आदि पढेर समय बर्बाद गर्न परेशान गर्दैनन् त्यस्तै गरी उनीहरूको ध्यान धेरै कम छ। छोटो भिडियो सामग्री धेरै आकर्षक छ र सजिलैसँग दर्शकहरूको ध्यान खिच्न सक्छ।
बहु स्ट्रीमिंग अवसरहरू
आज, भिडियो सामग्रीको प्रसारको लागि धेरै च्यानलहरू छन्। यूट्यूब पक्कै पनि यसमा अग्रणी छ। यसले सामाजिक मिडियाको शक्तिसँग मिलेर मार्केटरहरूलाई उनीहरूको सामग्री प्रवर्धनमा मद्दत गर्दछ। एक तरीकाले, YouTube ग्राहक आधार र युट्युब दृश्य सामग्री बजारका लागि चासोको मुख्य प्यारामिटरहरू हुन्।
YouTube- असीमित विकास सम्भावनाहरू
YouTube संसारमा सब भन्दा प्रख्यात भिडियो सामग्री स्ट्रिमि platform प्लेटफर्म हो। प्लेटफर्ममा २ अरब भन्दा बढी सक्रिय मासिक प्रयोगकर्ताहरू र million१ करोड च्यानलहरू छन्। यसले सामग्री रचनाकारहरूको लागि उनीहरूको सामग्री लोकप्रिय बनाउन विस्तृत विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। लाइभस्ट्रीमिंग, सामाजिक मिडिया एकीकरण, ग्राहक व्यवस्थापन, आदि। विकासको लागि ईकोसिस्टम बनाउँदछ। तथ्या .्कका अनुसार, यूट्यूब विज्ञापन अधिकांश कम्पनीहरूको लागि टिभी विज्ञापनहरू भन्दा उच्च आरओआई ल्याउँदैछ। YouTube पार्टनर प्रोग्राम र अन्य सम्बद्ध मार्केटिंग अवसरहरू यस गतिविधिको सबै अंश हुन्।
कुनै पनि सफल भिडियो सामग्री अभियानको लागि उच्च-गुणवत्ता भिजुअलसँग सामग्रीको संलग्नता महत्त्वपूर्ण छ। तर, एक उच्च स्तरको सment्लग्नताको साथ एक ठोस यूट्यूब ग्राहक आधार प्लेटफर्मको सम्भाव्यता अनलक गर्नको लागि महत्वपूर्ण हो। मोनेटाइजेशन सुरू गर्नको लागि YouTube मा, एक सिर्जनाकर्तासँग कम्तिमा १००० वास्तविक YouTube ग्राहकहरू हुनु आवश्यक छ। थप रूपमा, वैध YouTube दृश्यहरूको न्यूनतम 1000००० घण्टा पनि एक प्रमुख मापदण्ड हो। यी न्यूनतम आवश्यकताहरू हुन्। यदि तपाईं घाता .्कीय वृद्धिलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने YouTube सment्लग्नताको लागि थप प्रयासहरू आवश्यक छन्।
YouTube स YouTube्लग्नताको मोडहरू
कुनै पनि मिडिया प्लेटफर्म को लोकप्रियता दर्शकहरु को सगाई को स्तर मा निर्भर गर्दछ। भिडियो सामग्री प्लेटफर्मको रूपमा YouTube अन्य समान अनुप्रयोगहरूको तुलनामा धेरै अन्तरक्रियात्मक हो। यसबाहेक, परम्परागत मिडिया जस्तै टिभी, चलचित्रहरू, आदि। सीमितताहरू छन् जब यो दर्शकहरूको कुराकानीको कुरा आउँछ। YouTube सment्लग्नताको धेरै स्तरहरू छन्। उनीहरु,
सदस्यहरू कुनै पनि YouTube च्यानलको मेरुदण्ड हुन्। यो YouTube दृश्यहरू वृद्धि गर्न सक्षम वफादार दर्शक समुदाय हो। भिडियो सामग्री मार्केटिंग केवल तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ जब उच्च अन्तरक्रियात्मक ग्राहक समुदाय छ। यस कारणले गर्दा, प्रायः सिर्जनाकर्ताहरूसँग बहु सोशल मीडिया प्लेटफर्महरूमा YouTube ग्राहक समुदाय पृष्ठहरू छन्।
यूट्यूब 'लाइक' र साझा
व्यक्तिले अन्य सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू मार्फत यूट्यूब भिडियोहरू पहुँच गर्दछ। YouTube ले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको लागि साझेदारी र एम्बेडिंग विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। यसले गुणक प्रभाव सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
YouTube टिप्पणीहरू सामग्री मार्केटिंगको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो YouTube संलग्नताको अन्तिम रूप हो। समग्र हेराई समय बृद्धि गर्न एक भिडियो मद्दतको बारेमा विशेष गरी सकारात्मक टिप्पणीहरू। YouTube एल्गोरिथ्मले यी अन्तर्क्रियाहरूलाई विचारमा लिन्छ र भिडियो खोजी गतिविधिमा लोकप्रिय हुन सक्छ। यो तपाइँको YouTube ग्राहक आधार भन्दा परको यसको सर्कुलेशनमा मद्दत गर्दछ।
टिप्पणी सage्लग्नता बढाउनको लागि सुझावहरू
यदि तपाईं आफ्नो यूट्यूब च्यानल बढाउन चाहानुहुन्छ भने, यो तपाईंको भिडियोको बारेमा टिप्पणी संलग्नता बढाउन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। स्वाभाविक रूपमा, कुनै पनि राम्रो सामग्री जैविक टिप्पणीहरू ल्याउन सक्षम छ। तर, यो एक फलफूल भिडियो सामग्री मार्केटिंग पहल को लागी पर्याप्त नहुन सक्छ। तपाईंले एक पेशेवर टिप्पणी मार्केटिंग रणनीति लिन आवश्यक छ। यसले तपाईंको सामग्रीलाई व्यस्त राख्न तपाईंको दर्शकहरूलाई प्रोम्प्ट गर्नुपर्नेछ।
YouTube टिप्पणी संलग्नता बढाउनका लागि केहि सुझावहरू छन्,
प्रतिक्रिया फिडब्याकको जवाफ दिनुहोस्:
एक सिर्जनाकर्ता भएको कारण, तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूको टिप्पणीहरूको लागि धेरै उत्तरदायी हुनुपर्दछ। प्रत्येक टिप्पणीलाई प्रतिक्रियाको रूपमा लिनुहोस् र तिनीहरूलाई प्रतिक्रिया दिन प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको जवाफ र टिप्पणीहरूको लागि मनपर्दा दर्शकहरूलाई अधिक टिप्पणी पोष्ट गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। यसले यूट्यूबलाई वास्तविक वार्तालापको लागि प्लेटफर्मको रूपमा बढाउनेछ र दर्शक संलग्नता बढाउनेछ।
सामाजिक मिडियामा सर्वश्रेष्ठ टिप्पणी स्क्रीनशटहरू फीचर गर्नुहोस्:
व्यक्ति मान्यता मन पराउँछन्। यसले उनीहरूलाई उपलब्धि र सेलिब्रेटी जस्तो स्थिति प्रदान गर्छ। तपाइँ तपाइँका ग्राहकहरूबाट केहि सकारात्मक टिप्पणीहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई विभिन्न सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू मार्फत फ्लैश गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँका सदस्यताहरूलाई अधिक यूट्यूब टिप्पणी पोष्ट गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। यो तपाइँको YouTube च्यानल को लागी जैविक पहुँच प्रदान गर्दछ।
सस्तो र टिप्पणीहरूको आधारमा प्रतियोगिता:
स्थापना गरियो तपाईं कन्दर्स उनीहरूको ग्राहकका लागि नियमित रूपमा सस्तो र अन्य प्रतियोगिताहरू चलाउनुहोस्। यो बहु मापदण्डमा आधारित हुन सक्छ। सबै भन्दा राम्रो टिप्पणी वा सबैभन्दा मनपराइएको टिप्पणीहरूको लागि सस्ता खोल्न यो एक राम्रो रणनीति हो। यसले तपाइँको ग्राहकहरु बीच उत्साह पैदा गर्दछ र सस्ता टिप्पणी गर्न को प्रोत्साहन को रूप मा कार्य गर्दछ। तपाइँ तपाइँको YouTube टिप्पणीहरु मा एक बहु गुणा वृद्धि को आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्य सिर्जनाकर्ताका भिडियोहरूमा टिप्पणी गर्दै:
सामग्री सिर्जनाकर्ताको रूपमा, सहयोग तपाईंको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तर संयुक्त रूपमा सामग्री सिर्जना गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। अन्य लोकप्रिय यूट्यूब च्यानलहरु मा टिप्पणी पोस्ट तपाइँको लागी धेरै फाइदाजनक छ। तपाईं सकारात्मक टिप्पणीहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ वा केहि प्रश्नहरूको जवाफको रूपमा तपाईंको भिडियो लिंकहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको च्यानलमा ट्राफिक बढाउनेछ र तपाईंलाई YouTube ग्राहकहरू ल्याउन सक्छ।
अन्तर्क्रियात्मक सामग्री बनाउने:
यो एक पक्ष जुन अधिकांश जीवनशैली र यात्रा यात्रा गर्दछ। सामग्री शीर्षकहरूमा दर्शक प्राथमिकता खोजीको पक्ष। धेरै YouTubers आफ्नो ग्राहकहरु लाई आफ्नो अर्को भाग को लागी शीर्षक को बारे मा टिप्पणी गर्न प्रोत्साहन। यसले टिप्पणी सment्लग्नताको धेरै ड्राइव गर्दछ र ग्राहकहरू सम्मानित महसुस गर्दछन्। तपाईं प्रश्न-उत्तर वा लाइभस्ट्रीमिंग सत्रहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन टिप्पणीहरू द्वारा संचालित हुन्छ।
टिप्पणी संलग्नता को फाइदा
लक्षित सामग्री को माध्यम बाट डिजिटल मार्केटिंग को लागी धेरै मेहनत चाहिन्छ। अधिक महत्वका लागि सबै स्रोतहरू प्रयोग गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि YouTube च्यानलको लागि मुख्य सम्पत्ति यसको ग्राहक समुदाय हो। तपाईंको सामग्री दृश्यता तिनीहरूलाई राम्रोसँग संलग्न गराएर गुणा गर्न सक्दछ। तपाइँको भिडियोलाई कमेन्ट गर्न तपाइँको ग्राहकलाई प्रोत्साहित गर्नु यो संलग्नतालाई बढावा दिनको प्रमुख चरण हो। टिप्पणी संलग्नता को प्रमुख लाभहरू हुन्:
YouTube दृश्यमा बहु गुणा वृद्धि
विज्ञापन राजस्व वृद्धि
प्रतिक्रियामार्फत स्थिर सुधारको लागि संयन्त्र
ग्राहक समुदाय एकतालाई सुदृढ गर्दै
उच्च खोज रैंकिंग र च्यानल दृश्यता
'लाइक र' सेयरहरू बढाउनको अलावा, तपाईंले आफ्नो भिडियोहरूको लागि युट्युब कमेन्ट बढाउने कुरामा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यो तपाईंको डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिमा एक प्रमुख माइलस्टोन हुनु पर्छ।
YouTube सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको उच्च माग छ। विशाल ग्राहक आधार भएको च्यानल विज्ञापनको लागि प्रमुख माध्यम हुन्। यो एक ज्ञात तथ्य हो कि स्थिरताको साथ गुणस्तरको सामग्री तपाईंको च्यानलको वृद्धिको लागि महत्त्वपूर्ण छ। तर यो तपाईंको YouTube ग्राहक समुदाय विस्तार गर्न समान रूपले महत्त्वपूर्ण छ। एक भिडियो सामग्री निर्माताको रूपमा, तपाईले यस पक्षलाई उच्च प्राथमिकताका रूपमा लिनु पर्छ। प्रत्येक भिडियो पछाडि तपाईंको प्रयासहरू फलदायी हुन्छन् जब दर्शकहरूले तपाईंको सामग्रीलाई सकरात्मक रूपमा संलग्न गर्छन्।
तपाइँका भिडियोहरूको बारेमा स्वस्थ कुराकानीहरू प्रमोट गर्नु तपाइँको सदस्यता लिने उत्तम तरिका हो। यो तपाइँको ग्राहकहरु लाई तपाइँको भिडियो मा टिप्पणी गर्न प्रोत्साहित गरेर गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि तपाईसँग सक्रिय ग्राहक समुदाय हुनु आवश्यक छ। तपाईको ग्राहक आधार बढाउने समय लिने प्रक्रिया हो। आजकल, तपाईं विभिन्न एजेन्सीहरू मार्फत वास्तविक यूट्यूब ग्राहकहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। यसले विश्व-स्तरीय सामग्री मार्केटिंग सेवाहरू पुर्‍याउन तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।
तपाइँका भिडियोहरूमा प्राय: टिप्पणी गर्न YouTube सदस्यताहरूलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने? सबपल्स लेखकहरू द्वारा,5मई 2021
सधैंभरि कस्तो महसुस हुन्छन् भनेर YouTube को वरिपरि भएको छ। र यसको ब्रान्ड बजारमा हेर्नका लागि उपभोक्ताहरूको लागि यसको मान पनि बढ्न जारी छ। वास्तवमा, १० मा9मार्केटर्सले YouTube मा यूट्यूब प्रयोग गर्ने योजना ...
२०१ 2013 मा जन्मिएको, Streamular.com का क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकामा यसको अफिसहरू छन्। वेबसाईटले यसको क्षमताको गर्व गर्दछ कि तपाईलाई विभिन्न सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू जस्तै ट्विच,…